ခရမ်းချဉ်သီး အစွမ်း ၆ မျိုးကဘာလဲ – Blue Sea
ခရမ်းချဉ်သီး အစွမ်း ၆ မျိုးကဘာလဲ
blueseaskt | August 15, 2019 | Knowledge | No Comments
ခရမ်းချဉ်သီးနှင့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး (၆) ချက်
ကျွန်တော်တို့သည် နေ့စဉ်စားသုံးဖို့ အခွင့်ရေးများစွာရှိပါသည်။ခရမ်းချဉ်သီးကို ယိုပြုလုပ် ၍သော်လည်းကောင်း၊ ချက်၍သော်လည်းကောင်း၊ အသားများချက်ရာတွင်အနှစ်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ လက်ဖက်သုပ်စားရာတွင် ထည့်၍သော်လည်းကောင်း၊ အခြားသီးနှံများနှင့်ရောကြော်၍ သော်လည်းကောင်း ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ပြုလုပ်စားသုံးကြသည်။ခရမ်းချဉ်သီးကို ကြိုက်လွန်းသော လူအချို့သည် သွားရေစာအဖြစ် ရေဆေးပြီး အလုံးလိုက်ပင် အစိမ်းစားသုံးတတ်ကြသည်။
ခရမ်းချဉ်သီးကိုစားလျှင် အသားအရေလှသည်ဟူသော အချက်ကို လူတိုင်းနီးပါး ကောင်းစွာသိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။ထိုကဲ့သို့ ခရမ်းချဉ်သီးကို စားလျှင် ရရှိနိုင်မည့် အကျိုးကျေးဇူး (၆) ချက်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
(၁) ခရမ်းချဉ်သီးတွင် အနီရောင်ကိုဖြစ်စေသော လိုင်ကိုပင်း ဟူသောရောင်ခြယ် ပစ္စည်းပါဝင်ပါသည်။ လိုင်ကိုပင်း ပါဝင်မှုကြောင့် ခရမ်းချဉ်သီးကိုစားသုံးပါက အသားအရေလှစေသည့်အပြင် နှလုံး နှင့်ဆံပင်တို့ကိုပါ ကျန်းမာကောင်းမွန်စေပါသည်။
(၂) ကယ်လ်စီယမ်ဓာတ်လည်း ပါဝင်သောကြာင့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိ အရိုးများ ၊ သွားများကိုလည်း ကျန်းမာကောင်းမွန်စေပါသည်။
(၃) ခရမ်းချဉ်သီးတွင် မျက်လုံးအားကောင်းစေသော ဗီတာမင်အေ လည်းပါဝင်ပါသည်။ထို့ကြောင့် အမြင်အာရုံအားနည်းသူများ ခရမ်းချဉ်သီးကို ပိုမိုစားသုံးသင့်ပါသည်။
(၄) ခရမ်းချဉ်သီးတွင် ရေဓာတ်များစွာပါဝင်သည့် အတွက် အစိမ်းလိုက်စားသုံးပေးပါက ဆီးကျောက် ဖြစ်ခြင်းများကိုလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
(၅) တစ်နေ့ (၁)လုံး ပုံမှန်စားသုံးပေးပါက အဆုတ်ကိုလည်း ကျန်းမာစေသည်။ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူများသည် ခရမ်းချဉ်သီးကိုနေ့စဉ်ပုံမှန်စားသုံးသင့်ပါသည်။
(၆) ခရမ်းချဉ်သီးသည် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားမှုများမှလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ လိုင်ကိုပင်း ပါဝင်မှုအများဆုံးဖြစ်ပြီး ဗီတာမင်စီ နှင့် ဗီတာမင်အေတို့လည်း ပါဝင်သဖြင့် အစာအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
ခရမျးခဉျြသီးနှငျ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူး (၆) ခကျြ
ကြှနျတျောတို့သညျ နစေ့ဉျစားသုံးဖို့ အခှငျ့ရေးမြားစှာရှိပါသညျ။ခရမျးခဉျြသီးကို ယိုပွုလုပျ ၍သျောလညျးကောငျး၊ ခကျြ၍သျောလညျးကောငျး၊ အသားမြားခကျြရာတှငျအနှဈအဖွဈလညျးကောငျး၊ လကျဖကျသုပျစားရာတှငျ ထညျ့၍သျောလညျးကောငျး၊ အခွားသီးနှံမြားနှငျ့ရောကွျော၍ သျောလညျးကောငျး ပုံစံအမြိုးမြိုးဖွငျ့ပွုလုပျစားသုံးကွသညျ။ခရမျးခဉျြသီးကို ကွိုကျလှနျးသော လူအခြို့သညျ သှားရစောအဖွဈ ရဆေေးပွီး အလုံးလိုကျပငျ အစိမျးစားသုံးတတျကွသညျ။
ခရမျးခဉျြသီးကိုစားလြှငျ အသားအရလှေသညျဟူသော အခကျြကို လူတိုငျးနီးပါး ကောငျးစှာသိကွမညျဖွဈပါသညျ။ထိုကဲ့သို့ ခရမျးခဉျြသီးကို စားလြှငျ ရရှိနိုငျမညျ့ အကြိုးကြေးဇူး (၆) ခကျြကို အောကျတှငျ ဖျောပွလိုကျပါသညျ။
(၁) ခရမျးခဉျြသီးတှငျ အနီရောငျကိုဖွဈစသေော လိုငျကိုပငျး ဟူသောရောငျခွယျ ပစ်စညျးပါဝငျပါသညျ။ လိုငျကိုပငျး ပါဝငျမှုကွောငျ့ ခရမျးခဉျြသီးကိုစားသုံးပါက အသားအရလှေစသေညျ့အပွငျ နှလုံး နှငျ့ဆံပငျတို့ကိုပါ ကနျြးမာကောငျးမှနျစပေါသညျ။
(၂) ကယျလျစီယမျဓာတျလညျး ပါဝငျသောကွာငျ့ ခန်ဓာကိုယျရှိ အရိုးမြား ၊ သှားမြားကိုလညျး ကနျြးမာကောငျးမှနျစပေါသညျ။
(၃) ခရမျးခဉျြသီးတှငျ မကျြလုံးအားကောငျးစသေော ဗီတာမငျအေ လညျးပါဝငျပါသညျ။ထို့ကွောငျ့ အမွငျအာရုံအားနညျးသူမြား ခရမျးခဉျြသီးကို ပိုမိုစားသုံးသငျ့ပါသညျ။
(၄) ခရမျးခဉျြသီးတှငျ ရဓောတျမြားစှာပါဝငျသညျ့ အတှကျ အစိမျးလိုကျစားသုံးပေးပါက ဆီးကြောကျ ဖွဈခွငျးမြားကိုလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါသညျ။
(၅) တဈနေ့ (၁)လုံး ပုံမှနျစားသုံးပေးပါက အဆုတျကိုလညျး ကနျြးမာစသေညျ။ ဆေးလိပျသောကျသုံးသူမြားသညျ ခရမျးခဉျြသီးကိုနစေ့ဉျပုံမှနျစားသုံးသငျ့ပါသညျ။
(၆) ခရမျးခဉျြသီးသညျ ကငျဆာရောဂါဖွဈပှားမှုမြားမှလညျး ကာကှယျပေးနိုငျပါသညျ။ လိုငျကိုပငျး ပါဝငျမှုအမြားဆုံးဖွဈပွီး ဗီတာမငျစီ နှငျ့ ဗီတာမငျအတေို့လညျး ပါဝငျသဖွငျ့ အစာအိမျကငျဆာ ဖွဈပှားခွငျးကို ကာကှယျပေးနိုငျပါသညျ။
And the health benefits of tomatoes (6)
There are several daily opportunity to write, either. Tomato jam. And, either. Meat and plating, လကျဖကျသုပျ either. But stone mixed with other crops, and the tomatoes are consumed in many forms. Some people like this too often consumed raw log trees.
If you eat eggplant skin soon almost everyone will be well-known fact that if you eat tomatoes. Such benefits available (6) The list below.
(1) tomato red Lai Ping contains the pigment. Lai Ping who eat tomatoes due to the presence of the heart in addition to skin and hair healthy.
(2) containingacalcium supplement the body’s bones, Healthy teeth.
Tomatoes (3) includesastrong eye vitamin. Therefore visual weak should eat more tomatoes.
(4) tomatoes for many raw water consumption in preventing urinary stones being.
(5) to one (1) regular consumption of the lungs and healthy day. Those smokers tomatoes should be consumed daily.
Tomatoes (6) for preventing cancer as well. Lai Ping highest concentrations of vitamin C and vitamin include preventing the incident occurred in stomach cancer.
Yellow snow Lwin
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး က အသက် (၁၂၅)အရွယ် မြန်မာ့အသက်ကြီးဆုံး အဖွားအို